Isifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekile > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ikhithi yosizo lokuqala yesifo sikashukela
Yini okufanele ibe sekhishini losizo lokuqala uma umndeni unesifo sikashukela? Sekuvele kuncike kakhulu ekutheni hlobo luni lwesifo sesiguli onesifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, isifo sikashukela singaba zezigaba ezimbili: uhlobo lokuqala nolwesibili. ...
Ama-ARVI nesifo sikashukela
Ungawelapha kanjani umkhuhlane, umkhuhlane, ukugabha, nohudo kwisifo sikashukela Uma une-nausea, ukuhlanza, umkhuhlane, isifo sohudo noma ezinye izimpawu zesifo esithathelwanayo, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. ...
Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela nezimpawu zabo
Izimpawu zesifo sikashukela Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela kubantu abadala okungenani ama-25% abantu abanesifo sikashukela abazi ngaso isifo sabo. ...
Amavithamini esifo sikashukela Lapho ebhekene nesifo sikashukela, imvamisa ngemuva kwenkambo yokwelapha, kuzwakala ubuthakathaka kanye ne-malaise. ...
Izimpawu nezimpawu zesifo sikashukela (kubantu besifazane, emadodeni nasezinganeni)
Izimpawu zesifo sikashukela kubantu besifazane, emadodeni nasezinganeni. Izimpawu zokuqala zesifo sikashukela Umuntu ngamunye uzokuthola kusiza ukufunda le ndatshana ngezimpawu zesifo sikashukela. Kubalulekile ukuthi ungaphuthelwa izibonakaliso zokuqala zesifo sikashukela kuwe, owakwakho, umuntu osekhulile noma ingane. ...
Amagxolo e-Aspen - ikhambi lomlingo likashukela
Ungaselapha kanjani isifo sikashukela nge-aspen bark Isifo sikashukela sibhekwa njengesinye sezifo eziyinkimbinkimbi kakhulu, esingalapheki sohlelo lwe-endocrine. Isikhathi sonke sokutadisha lesi sifo, kwakutholakala izindlela ezisebenzayo zokwelapha kuphela, kepha hhayi ukwelashwa. ...
Ukubhema nesifo sikashukela: ingabe kunomthelela egazini? Ababambe iqhaza abaningi bazama ukuthola impendulo eqondile yombuzo wokuthi kungenzeka yini ukubhema nesifo sikashukela sohlobo 2. ...
Kanjani futhi kungani usuku lokulwa nesifo sikashukela lubanjwa Emuva kuka-1991, i-International Diabetes Federation yethule usuku ngokumelene nesifo sikashukela. Lokhu sekuyindlela edingekayo ekuphenduleni ekusongeleni okwandayo kokusabalala kwalesi sifo. ...
Yini i-mellitus enxephezelwe futhi engancishisiwe?
Izigaba zesifo sikashukela: ishukela elibolile, elincitshisiwe nelinxephezelisiwe - kuyini? ...
Idatha yangempela yokuthi uphila kanjani nesifo sikashukela
Bangaki abaphila nohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela Ukuxilongwa kwesifo sikashukela akusona isizathu sokwethuka. Yize lesi sifo singesinye eselapheka kakhulu futhi singelapheki kahle, akudingekile ukusayina isigwebo sentambo kusengaphambili. ...
Ingabe iqembu lokukhubazeka lohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2
Ingabe iqembu lokukhubazeka labanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2 lubekwa? Izazi zesifo sikashukela esinenkinga yakhe kufanele silwe njalo ukuze sithuthukise inhlala-kahle yakhe. ...
Thayipha izinhloso 1 nohlobo 2 sikashukela
I-Homeopathy yohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela Mayelana nemigomo ye-homeopathy Mayelana nokusebenza ngempumelelo Mayelana nezinkinga Mayelana nezimpawu zokwelashwa Ekwelapheni amajoyinti, abafundi bethu basebenzise ngempumelelo i-DiabeNot. ...
Ukwelashwa okuhlukile kohlobo lwesifo sikashukela I no-II
Ngabe isifo sikashukela siyingozi kubantu? Isifo sikashukela sithathwa njengesifo esibi ngokwanele ngenxa yezinkinga zaso. Ngaphezu kwalokho, ekuqaleni kwesigaba sokukhula kwe-pathology, akulula kangako ukuyikhomba ngisho nangolwazi lwezimpawu ezinkulu zokubonisa. ...